Erlotinib - AASraw မသုံးခင်မည်သည့်အချက်အလက်ကိုသင်သိထားရမည်နည်း
အပေါ် Posted 05 / 08 / 2021 by ၏ ရေးသားခဲ့သည် ပြတိုက်.
ဘယ်လူနာတွေမှာ Erlotinib အထိရောက်ဆုံးလဲ။
Erlotinib နှင့်ဆက်စပ်သည့်အန The တရာယ်များမှာအဘယ်နည်း။
မည်သည့်ဆေးဝါးများသို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်ဆေးများသည် Erlotinib နှင့်ထိတွေ့သနည်း။
FDA က Erlotinib ကုသမှုကိုအတည်ပြုခဲ့သည်
Erlotinib (CAS:183321-74-6) tyrosine kinase inhibitors အဖြစ်လူသိများမူးယစ်ဆေးဝါးအတန်းပိုင်။ ဒါဟာ epidermal growth factor receptor (EGFR) လို့ခေါ်တဲ့ပရိုတင်းတစ်ခုရဲ့လုပ်ဆောင်မှုကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်တယ်။ EGFR ကိုကင်ဆာဆဲ (လ်) များစွာနှင့်ပုံမှန်ဆဲလ်များပေါ်တွင်တွေ့ရသည်။ ၎င်းသည် antenna အနေဖြင့်ဖြစ်ပြီးဆဲလ်များထံမှကြီးထွားရန်နှင့်ခွဲရန်ပြောသောအခြားဆဲလ်များနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှအချက်ပြမှုများကိုလက်ခံရရှိသည်။ EGFR သည်ကြီးထွားမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်နှင့်ကလေးဘဝတွင်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်ပြီးအရွယ်ရောက်ပြီးသူများနှင့်အဟောင်းနှင့်ပျက်စီးနေသောဆဲလ်များကိုပုံမှန်ပြန်လည်နေရာချထားရန်ကူညီသည်။ သို့သော်ကင်ဆာဆဲ (လ်) များစွာတွင်ပုံမှန်အားဖြင့် EGFR ပမာဏများစွာရှိသည်။ သူတို့၏ EGFR သည်ပရိုတိန်းအတွက်မျိုးရိုးဗီဇကုဒ်ပါသည့်ဒီအင်အေ၏ mutation ကြောင့်ပြောင်းလဲသွားသည်။ ရလဒ်မှာ EGFR မှလာသောအချက်အလက်များသည်အလွန်ပြင်းလွန်း။ အလွန်များပြားသောဆဲလ်များကြီးထွားမှုနှင့်ကွဲပြားမှုကိုဖြစ်စေသောကင်ဆာ၏လက္ခဏာဖြစ်သည်။
ဘယ်လိုမျိုး Erlotinib အလုပ်မလုပ်?
erlotinib ၏လက်တွေ့ antitumoraction အရေးယူမှု၏ယန္တရားအပြည့်အဝသွင်ပြင်လက္ခဏာမဟုတ်ပါဘူး။ Erlotinib သည်နှင့်သက်ဆိုင်သော tyrosine kinase ၏အတွင်းပိုင်းဆဲလ် phosphorylation ကိုတားဆီးပေးသည် epidermal ကြီးထွားမှုအချက်အဲဒီ receptor (EGFR) ။ အခြား tyrosine kinase receptors နှင့်ပတ်သက်။ တားစီး၏တိကျတဲ့အပြည့်အဝသွင်ပြင်လက္ခဏာမထားပါဘူး။ EGFR ကိုပုံမှန်ဆဲလ်များနှင့်ကင်ဆာဆဲလ်များ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ဖော်ပြသည်။
ရောဂါများကဘာလဲ Erlotinib အဓိကအားဖြင့်ကုသ?
ဓာတုကုထုံးဖြင့်ထည့်သွင်းလိုက်သောဆဲလ်သေးငယ်သည့်အဆုပ်ကင်ဆာ၌ Erlotinib သည်ဓာတုကုထုံးတစ်ခုတည်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကယေဘုယျအားဖြင့်ရှင်သန်မှုကို ၁၉% တိုးတက်စေပြီးတိုးတက်မှုမရှိသောရှင်သန်မှု (PFS) ကို ၂၉% ဖြင့်တိုးတက်စေသည်။ အမေရိကန်အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှု (FDA) မှအတည်ပြုခဲ့သည် ချစ်သူ အနည်းဆုံးကြိုတင်ဓါတုဆေးသွင်းကုသမှုအစီအစဉ်ပျက်ကွက်သောဒေသအလိုက်အဆင့်မြင့်သို့မဟုတ် metastatic Non- သေးငယ်တဲ့ဆဲလ်အဆုတ်ကင်ဆာကုသမှုများအတွက်။
အဆုတ်ကင်ဆာတွင် erlotinib သည် EGFR ဗီဇပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အတူ (သို့) မပါဘဲလူနာများတွင်ထိရောက်မှုရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။ သို့သော် EGFR mutations နှင့်အတူလူနာများတွင်ပိုမိုထိရောက်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်ရှင်သန်မှု၊ တိုးတက်မှုမရှိသောရှင်သန်မှုနှင့်တစ်နှစ်ရှင်သန်မှုသည်စံဒုတိယအဆင့်နှင့်ဆင်တူသည် ကုထုံး (docetaxel သို့မဟုတ် pemetrexed) ။ ယေဘူယျတုန့်ပြန်မှုနှုန်းသည်စံဒုတိယဓါတုဆေးသွင်းကုသခြင်းထက် ၅၀% ပိုကောင်းသည်။ ဆေးလိပ်မသောက်သူများနှင့်ဆေးလိပ်သောက်သူများအနေဖြင့် adenocarcinoma သို့မဟုတ် BAC ကဲ့သို့သောအမျိုးအစားခွဲခြားထားသူများသည် EGFR ဗီဇပြောင်းလဲခြင်းများပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်၊ သို့သော်လူနာအားလုံးတွင် mutation ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည် ။ EGFR ဗီဇပြောင်းလဲခြင်းအတွက်စမ်းသပ်မှုတစ်ခု Genzyme မှပြုလုပ်သည်။
၂၀၀၅ ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလတွင် FDA သည် erlotinib ကို gemcitabine နှင့်ပေါင်းစပ်။ ဒေသအဆင့်ရှိ၊ ပြန်လည်ရှာဖွေ။ မရ၊
AASraw သည် Erlotinib ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။
Erlotinib သည် ErbB1 သို့ 2.6A resolution ဖြင့်ချည်နှောင်ခြင်း၊ မျက်နှာပြင်အရောင်သည်အခြားသော ATP အပြိုင်အဆိုင်သေးငယ်သည့်မော်လီကျူး tyrosine kinase inhibitors နှင့်အတူ hydrophobicity.As ကိုပြသသည်။ ဥပမာ CML ရှိ imatinib ကဲ့သို့လူနာများသည်ခုခံအားမြန်ဆန်သည်။ erlotinib ၏ဖြစ်ရပ်မှာဤပုံမှန်အားဖြင့်ကုသမှုစတင်ကတည်းက 8-12 လအတွင်းတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ခုခံမှု၏ ၅၀% ကျော်သည် ATP စည်းနှောင်ထားသော EGFR kinase ဒိုမိန်းတွင် mutation ကြောင့်ဖြစ်ရခြင်း၊ Polar threonine အကြွင်းအကျန်ကို nonpolar methionine ကျန်ကြွင်း (T50M) ဖြင့်အစားထိုးခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ PI790K ၏ ERBB20 မှီခို activation မောင်းသော hepatocyte တိုးတက်မှုနှုန်းအချက်အဲဒီ receptor ။
ဘယ်လိုလဲ Is ERlotinib Cတကယ Used In The Cပိတ်
Erlotinib ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစားအစာနှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေး ဦး စီးဌာန (FDA) ကပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်အခြားကုထုံးတစ်ခုအနေဖြင့်ပြန်လည်ကုသသောအဆင့်မြင့်ဆဲလ်သေးငယ်သည့်အဆုတ်ကင်ဆာရောဂါကိုအသုံးပြုရန်အသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ပန်ကရိယကင်ဆာရောဂါအတွက်အခြားဆေးတစ်မျိုးဖြစ်သော gemcitabine နှင့်တွဲဖက်အသုံးပြုရန် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်အတည်ပြုခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်ဆဲလ်အဆုတ်ကင်ဆာရောဂါရှိသူများနှင့်ပလက်တီနမ်အခြေပြုဆေးဝါးဖြစ်သော cisplatin သို့မဟုတ် carboplatin ကဲ့သို့သောရောဂါလက္ခဏာများဖြင့်ကုသမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့်အဆင့်မြင့်ဆဲလ်အဆုတ်ကင်ဆာလူနာများအတွက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုထုံးကိုစတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ erlotinib သောက်သောလူနာများသည်များသောအားဖြင့်ဆေးကိုအတော်လေးသည်းခံတတ်သည်။ အသုံးများသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာအရေပြားအဖုနှင့်ဝမ်းလျှောခြင်းဖြစ်သည်။
In Wဟဲ့ Pရောက်ရှိနေသူများ Is ERlotinib Most Eစုံလင်?
လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်းဆရာဝန်များသည် EGFR ကိုပိတ်ဆို့စေသော erlotinib ကဲ့သို့သော tyrosine kinase inhibitors နှင့်အတွေ့အကြုံများစွာရရှိခဲ့သည်။ ဤဆေးများသည်လူနာများတွင်အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်ကြောင်း ပို၍ ရှင်းလင်းစွာထင်ရှားလာသည် အဆုတ်ကင်ဆာ အထူးသဖြင့် EGFR ပရိုတင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အထူးသဖြင့်မျိုးဗီဇပြောင်းလဲခြင်းကိုသယ်ဆောင်သည်။ ဤလူနာများသည်အာရှနွယ်ဖွားအမျိုးသမီးများဖြစ်ပြီး၊ bronchoalveolar adenocarcinoma ဟုလူသိများသောအဆုတ်ကင်ဆာပုံစံဖြင့်ဆေးလိပ်မသောက်သူများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် erlotinib သည်ဤလူမျိုးကွဲအုပ်စုများ၏ကင်ဆာကိုခွဲစိတ်ကုသမှုမကုသနိုင်လျှင်ပထမဆုံးကုသမှုအဖြစ်အတည်ပြုခဲ့သည်။
ဘာ Is ERlotinib Rကယ်ဆယ်ရေးစခန်းလား။
Erlotinib သည် EGFR ဗီဇပြောင်းလဲခြင်းကိုသယ်ဆောင်သောလူနာများအနက်အလွန်ထိရောက်သည်။ သို့သော်ထိုလူနာများပင်နောက်ဆုံး ၁၂ လခန့် erlotinib ကုထုံးပြီးနောက်ကင်ဆာ၏တိုးတက်မှုကိုပြသနိုင်လိမ့်မည်။ ဤသည်ကျန်ရှိသောကင်ဆာဆဲလ်များအတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးခုခံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကိစ္စများစွာတွင်ခုခံနိုင်မှုသည် erlotinib အား tyrosine kinase ဒိုမိန်းနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးသော EGFR ပရိုတိန်းတွင်ဒုတိယ mutation ဖြစ်ပေါ်မှု၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။ ဤလူနာများကိုကုသရန်နည်းလမ်းအသစ်များတွင်မကြာသေးမီကတီရိုစိုင်းနင် kinase inhibitor afatinib တစ်ခုတည်းသို့မဟုတ် cetuximab (Erbitux) နှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် EGFR ကိုမတူညီသောယန္တရားများကတားဆီးပေးသည်။
လေ့လာမှုများတွင်အဆုတ်ကင်ဆာအတွက် monotherapy အဖြစ်အသုံးပြုသော Erlotinib နှင့်အတူအသုံးများသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာအဖုအပိန့်များ (လူနာ ၇၅% ကိုထိခိုက်သည်)၊ ဝမ်းလျှောခြင်း (၅၄%)၊ အစာစားချင်စိတ်ပျောက်ဆုံးခြင်း (၅၂% စီ) ဖြစ်သည်။ ပန်ကရိယကင်ဆာအတွက် gemcitabine နှင့်တွဲသုံးသော Tarceva လေ့လာမှုတွင်အသုံးများသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု (လူနာ ၇၃% ကိုထိခိုက်ခြင်း)၊ အဖု (75%) နှင့် ၀ မ်းလျှောခြင်း (၄၈%) တို့ဖြစ်သည်။ Erlotinib နှင့်အတူဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်ကန့်သတ်ချက်များစာရင်းအပြည့်အစုံကိုအထုပ်လက်ကမ်းစာစောင်တွင်ကြည့်ပါ။
ဘယ်ဟာ Dကော်ဇောများသို့မဟုတ် Supplements Iဆက်သွယ်ပါ With ERlotinib?
CYP3A4 သည်အသည်းအတွင်းရှိအင်ဇိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးဖြိုခွဲခြင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်မှ erlotinib ကိုဖယ်ထုတ်ရန်ကူညီသည်။ CYP3A4 ကိုဟန့်တားသောဆေးများသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ erlotinib အဆင့်များစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးမြင့်မားသောအဆင့်များကြောင့် erlotinib မှအဆိပ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အဆိုပါဆေးများတွင် atazanavir (Reyataz)၊ clarithromycin (Biaxin), indinavir (Crixivan), itraconazole (Sporanox), ketoconazole (Nizoral), nefazodone (Serzone), nelfinavir (Viracept)၊ ritonavir (Norvir), saquinavir (Invirase) တို့ပါဝင်သည်။ telithromycin (Ketek) နှင့် voriconazole (VFEND) ။ ဤဆေးများကိုလက်ခံရရှိသောလူနာများတွင်အဆိပ်အတောက်မှကာကွယ်ရန် erlotinib ပမာဏအနည်းငယ်လိုအပ်သည်။
အချို့သောဆေးဝါးများသည် CYP3A4 အင်ဇိုင်းများ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့် erlotinib ကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ erlotinib ပမာဏကိုလျော့ကျစေပြီး၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ ထိုကဲ့သို့သောဆေးဝါးများ၏ဥပမာများတွင် rifampicin (Rifadin), rifabutin (Mycobutin), rifapentine (Priftin), phenytoin (Dilantin), carbamazepine (Tegretol), phenobarbital နှင့် St. John's Wort တို့ပါ ၀ င်သည်။ ဖြစ်နိုင်ရင် erlotinib သောက်နေတဲ့လူနာတွေမှာဒီဆေးတွေကိုရှောင်သင့်ပါတယ်။ အကယ်၍ အခြားဆေးဝါးများကရွေးချယ်စရာမဟုတ်ပါက erlotinib ဆေးများပိုမိုလိုအပ်သည်။ စီးကရက်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည်သွေး၌ erlotinib ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ လူနာများကိုဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်အကြံပေးသည်။
အစာအိမ်အတွင်းအက်ဆစ်ထုတ်လုပ်မှုကိုလျှော့ချသောဆေးများသည် erlotinib စုပ်ယူမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ ထို့ကြောင့်ပရိုတွန် pump inhibitors (PPI's ဥပမာ omeprazole [Prilosec, Zegerid]) ကို erlotinib နှင့်မသုံးသင့်ပါ။ erlotinib ကို H10-receptor blockers များမတိုင်မီ ၁၀ နာရီ (ဥပမာ - ranitidine [Zantac]) သို့မဟုတ်နှစ်နာရီအကြာတွင်အုပ်ချုပ်သင့်သည်။ အဆိုပါ H2- အဲဒီ receptor blocker ယူပြီး။
antacids ကိုအုပ်ချုပ်မှုကို erlotinib ၏အုပ်ချုပ်မှုနှင့်နာရီပေါင်းများစွာခွဲထားသင့်သည်။ Erlotinib အထူးသဖြင့် warfarin (Coumadin) သောက်နေသည့်လူနာများတွင်သွေးထွက်ခြင်းအန္တရာယ်ကိုမြင့်တက်စေသည်။ warfarin သောက်သောလူနာများကိုအနီးကပ်စစ်ဆေးသင့်သည်။
FDA က Approved Erlotinib ကုသ
၂၀၁၆ ခုနှစ်အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်တွင်အမေရိကန်စားနပ်ရိက္ခာနှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဌာနမှသေးငယ်သောအဆုတ်ကင်ဆာကုသမှုအတွက် erlotinib (TARCEVA, Astellas Pharm Global Development Inc. ) ၏ညွှန်းကိန်းကိုပြုပြင်ခဲ့သည် (NSCLCအဘယ်သူ၏ကင်ဆာတိကျတဲ့ epidermal ကြီးထွားမှုအချက် receptor (EGFR) ဗီဇပြောင်းလဲမှုတွေရှိသည်သောလူနာများမှအသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်ရန်။
ဆေးထိုးခြင်းအပြောင်းအလဲသည် NSCLC နှင့်ကုသမှုခံယူသောဒုတိယလူနာများ၊ ဤလက္ခဏာများသည် FDA မှအတည်ပြုထားသောစစ်ဆေးမှုမှတွေ့ရှိသော EGFR exon 19 ဖျက်မှုသို့မဟုတ် exon 21 L858R အစားထိုးဗီဇပြောင်းလဲခြင်းရှိသူများကိုသာကန့်သတ်ထားမည်။ ယခင်က EGFR exon 19 ဖျက်မှုသို့မဟုတ် exon 21 အစားထိုးဗီဇပြောင်းလဲခြင်းရှိသည့်လူနာများအတွက်ယခင်လိုင်းအရိပ်အယောင်ကိုကန့်သတ်ထားသည်။
ဒီတံဆိပ်ကပ်ခြင်းဖြည့်စွက်သည် IUNO စမ်းသပ်မှု၏ရလဒ်များအပေါ်အခြေခံထားခြင်းဖြစ်သည်။ သံသရာလေးခုအတွင်းရောဂါတိုးတက်မှုသို့မဟုတ်လက်မခံနိုင်သောအဆိပ်အတောက်ကိုမကြုံတွေ့ဖူးသောအဆင့်မြင့် NSCLC နှင့်အတူလူနာ ၆၄၃ ယောက်တွင်ကုသမှုခံယူသည့် erlotinib ၏စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း၊ ပလက်တီနမ် -based ပထမ ဦး ဆုံးလိုင်းဓါတုဆေးသွင်းကုသမှု။ အဘယ်သူ၏မြင်းသရိုက်အနာ EGFR ဗီဇပြောင်းလဲမှုတွေ (exon 643 ဖျက်မှုသို့မဟုတ် exon 19 L21R ဗီဇပြောင်းလဲမှုတွေ) ကိုသက်ဝင်ရှိရှိလူနာဒီစမ်းသပ်မှုကနေဖယ်ထုတ်လိုက်ခဲ့သည်။ ရောဂါတိုးတက်မှု (သို့) လက်မခံနိုင်သောအဆိပ်သင့်မှုမတိုင်မီလူနာများအား ၁: ၁ ကို erlotinib သို့မဟုတ်ရလဒ်များအရအိပ်ယာစားရန်နေ့စဉ်တစ်ကြိမ် (၃၂၂ erlotinib, ၃၂၁ ရလဒ်များအရအိပ်ယာ) ကိုကျပန်းရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ကန ဦး ကုထုံးတိုးတက်မှုအပြီးတွင်လူနာများသည်ပွင့်လင်းမြင်သာသောအဆင့်သို့ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။ erlotinib မှကျပန်းလူနာ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် open-label အဆင့်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး၊ ဓာတုကုထုံးကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ၇၇% သောရလဒ်များအရရလဒ်များအရ placebo မှကျပန်းလူနာများသည် open-label အဆင့်သို့ ဝင်၍ erlotinib ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါစမ်းသပ်မှုရဲ့အဓိကအဆုံးမှတ်ခြုံငုံရှင်သန်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ရလဒ်များအရ erlotinib နှင့်ကုသမှုအပြီးတွင်ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်မှုသည် EGFR-activation mutations ကိုဖုံးကွယ်ထားခြင်းမရှိသော metastatic NSCLC အကျိတ်နှင့်အတူလူနာများအတွက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအဖြစ်ရလဒ်များအရအိပ်ယာထက်ကောင်းသည်မဟုတ်ကြောင်းပြသခဲ့သည် အဆိုပါ erlotinib လက်မောင်းနှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာလက်မောင်းအကြားတိုးတက်မှု - အခမဲ့ရှင်သန်မှုအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအဘယ်သူမျှမတွေ့ရှိခဲ့သည်။
FDA သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလိုအပ်ချက်များအသစ်သို့မဟုတ် IUNO စမ်းသပ်မှုရလဒ်အပေါ်အခြေခံပြီးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆိုင်ရာကတိကဝတ်များကိုတောင်းခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
Erlotinib သည်ကင်ဆာရောဂါကုသရန်သတ်မှတ်ထားသောဒြပ်ဆေးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သေးငယ်သည့်ဆဲလ်အဆုတ်ကင်ဆာကိုကုသရန်အတည်ပြုထားပြီး၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၊ သောက်သုံးသောဆေးများ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးအပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုများ၊ သတိပေးချက်များနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများနှင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ အသုံး Erlotinib.
 သောမတ်စ်အယ်လ်အသေးသုံးငွေ, MD (2003) ။ "သေးငယ်တဲ့ဆဲလ်အဆုတ်ကင်ဆာနှင့်အတူလူနာအတွက် Erlotinib နှင့်အတူ Tumor တုံ့ပြန်မှုနှင့်ရှင်သန်မှု၏အဆုံးအဖြတ်" ။ လက်တွေ့ကင်ဆာ၏ဂျာနယ်။ 1 (17): 3-4 ။
 “ အချို့သော NSCLC လူနာများကိုကုသရန် Tarceva အတွက် Rxhe စမ်းသပ်မှုကို FDA က FDA ကသဘောတူသည်။ မျိုးရိုးဗီဇ 10 ဇန်နဝါရီ 2020 ရယူရန်။
 Dudek AZ, Kmak KL, Koopmeiners J, et al ။ (2006) ။ "အရေပြားအဖုနှင့် bronchoalveolar histology ယခင်ကကုသအဆင့်မြင့်သို့မဟုတ် metastatic Non- သေးငယ်တဲ့ဆဲလ်အဆုတ်ကင်ဆာများအတွက်ကုထုံးအဖြစ် gefitinib နှင့်အတူကုသလူနာများတွင်လက်တွေ့အကျိုးကျေးဇူးနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်" အဆုတ်ကင်ဆာ။ 51 (1): 89-96 ။
 ဂျီအီး၊ ဂွတ်ဒ်ဒီ၊ ဂျီဂျီမမ်၊ ဟစ်စကုတ်စ်၊ ရူဘီနီမီတာ၊ ဘရူဒီဒီ၊ ဗော်လ်ဒဲန်ဂျီ၊ ဝီလျံအက်စ်၊ ဝိတ်လင်အက်စ်၊ နီကိုလွန်း RI - အင်ဆူလင်ကဲ့သို့သောကြီးထွားမှုအချက် - ၁ ကိုလက်ခံသောအချက်ပြမှုနှင့် gefitinib (ZD1839; Iressa) တွင်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ လူ့ရင်သားနှင့်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာဆဲလ်များ။ Endocr Relat Cancer ။ 2004 ဒီဇင်ဘာ; 11 (4): 793-814 ။
 Kobayashi K, Hagiwara K (2013) ။ "အဆင့်မြင့် nonsmall ဆဲလ်အဆုတ်ကင်ဆာ (NSCLC) တွင် Epidermal growth factor receptor (EGFR) mutation နှင့်ကိုယ်ပိုင်ကုထုံး" ။ ပစ်မှတ်ထားကင်ဆာ။ 8 (1): 27-33 ။ Doi: 10.1007 / s11523-013-0258-9 ။ PMC 3591525. PMID 23361373 ။
 Cohen ကို, မာတင် H ကို။ ; ဂျွန်ဆင်, ယောဟန် R ကို။ ; Chen က Yeh-Fong; Sridhara, Rajeshwari; Pazdur, ရစ်ချတ် (သြဂုတ်လ 2005) ။ “ FDA ဆေးဝါးအတည်ပြုချက်အကျဉ်းချုပ် - erlotinib (Tarceva) ဆေးပြား” ။ ကင်ဆာပညာရှင်။ 10 (7): 461-466 ။
 Blum, G, Gazit တစ် ဦး, Levitzki တစ် ဦး: IGF-1 အဲဒီ receptor kinase ၏အလွှာယှဉ်ပြိုင်မှု inhibitors ။ ဇီဝဓါတုဗေဒ။ 2000 ဒီဇင်ဘာ 26; 39 (51): 15705-12 ။
 "ကင်ဆာမူးယစ်ဆေးဝါး: တရားရုံးချုပ် Cipla Roche အပေါ်အယူခံဆုတ်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့" The Economic Times 16 ဒီဇင်ဘာလ 2017 ရယူရန် 24 ဒီဇင်ဘာလ 2019. ရက်နေ့တွင်မူရင်းကနေ 23 ဇွန်လ 2019. မော်ကွန်းတင်ခဲ့သည်။
 Delbaldo C၊ Faivre S၊ Raymond အီး။ Rev Med Interne ။ 2003 ဇွန်; 24 (6): 372-83 ။
 Chen X, Ji ZL, Chen YZ: TTD: ကုထုံးဆိုင်ရာပစ်မှတ်ဒေတာဘေ့စ။ Nucleic Acid Res ။ 2002 ဇန်နဝါရီ 1; 30 (1): 412-5 ။
 Filppula လေး, Neuvonen PJ, Backman JT: ပရိုတိန်း kinase inhibitors အားဖြင့် CYP2C8 နှင့် CYP3A လှုပ်ရှားမှုအပေါ်အချိန်မှီခို inhibitory သက်ရောက်မှု၏စသည်တို့အကဲဖြတ်ခုနှစ်တွင်။ မူးယစ်ဆေး Metab Dispos ။ 2014 ဇူလိုင်; 42 (7): 1202-9 ။ Doi: 10.1124 / dmd.114.057695 ။ Epub 2014 Aprပြီ 8 ။
13001 Views စာ
Dacomitinib ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - NSCLC ကိုဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲ။ Caner ကုသအပေါ် Cabozantinib အောင်မြင်မှုပုံပြင်များ